Caamsaa 22, 2018
Suuraa Amansiisaa Ifaa doegommii ittiin moohate. Haawwan Jilaa, Dubaroota Booranaa faayaa,saqaa-siiqqee fi uffaata aadaa isaanitiin bareedanii Jila Baallii bara 2017irratti hirmaatan keessaa
Guyyaa dubartoota Addunyaa fi Guyyaa Awurooppaa jedhamuun ka bara kana ayyaaneffame ilaalchisee haala jireenyaa dubartoota biyya keenyaa kan calaqisuu dorgommii suuraa kaasuu yokaan footoogiraafiitti kan hirmaate dargaggoo Amansiisaa Ifaa injifate jira.
Oguma suuraa kaasuu fi viidiyoo waraabuu, gulaauun dhaabbattoota mootummaa fi kan dhunfaa keessa hojjachuu isaa kan ibse Amansisaan gara fuula duraattis sirna Gadaa ilaalchisee filmii hojjachuuf karoorfachuu dubbata.
Dirree Tiyuub vidiyoo walleelee adda addaa dorgommiif dhiyeessee keessaa kan Haacaaluu Hundeessaa inni “ Maalan Jira” jedhu tokkoffaa ta’e waan injifaateef jecha vidiyoo wallee kanaa waraabuu fi gama gulaaluun (Best Director)jedhamee Amansisaa Ifaa badhaafamee jira.
Kana malees filmii gabaabaa qopheessen yeroo lama kan injifate yoo ta’u dhiyeenya kana Egzibishinii suuraalee dhiyeessee uummataan daw’atamee akka ture ibsee jira.